Nchịkọta ọnụọgụ maka ndị mmepe ngwa ekwentị | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ ngwa ngwa mkpanaka ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị nwere ọtụtụ ngwa mkpanaka, ọdịnala nchịkọta anaghị egbutu ya. Omume ibudata, omume ụlọ ahịa na omume ojiji bụ data dị mkpa nke nwere ike inyere gị aka ịbawanye ahịa ma ọ bụ nbudata, yana mmekọrịta onye ọrụ. Ndị mmadụ na-atụ anya na ahụmịhe dị iche mgbe ha na-emekọrịta na ngwaọrụ mkpanaaka… na nchịkọta nwere ike inyere gị aka ịchọta ohere.
Agụụ bụ Analytics Platform naanị lekwasịrị anya na ndị mmepe ngwa mkpanaka.
Gọọmentị na-enye ọtụtụ atụmatụ na uru bara ụba:
Dashboard - Ozugbo ị meghere dashboard ahụ, ọ ga-eju gị anya ịhụ ka ọ dị mfe iji nyochaa eserese gị na data gị. Dashboard na-egosi gị ihe niile n'otu oge n'ụzọ mara mma. Enweghị mkpa igwu n'ọtụtụ peeji iji chọta ozi ịchọrọ. Sochie ọtụtụ ngwa na-enweghị njedebe na Countly, ma gbanwee n'etiti ngwa gị, egwuregwu na eBooks dị mfe.
Àgwà Onye Ọrụ - Sochie nzụta ngwa-ngwa jiri usoro mmemme mmemme nke Countly. Sochie akparamagwa nke onye ahịa gị, yana ihe kpatara iwe iji mee ka itinye aka na ikwesị ntụkwasị obi dịkwuo elu. Lelee ndị egwuregwu gị anya iji hụ na ị gara nke ọma ma bulie ego gị na-enweta n'ịntanetị.
Mee Ngwa Ka Mma - Ndi otu n’enye gi aka itule ma tulee itinye aka na ntinye aka nke oma, na eme ka ihe di nma nke ihe ekwenti. Ihe nlere anya di nma na-egosi ebe ogwu di, na-enye ohere igbanye n'ime nsogbu n'onwe ya iji bulie mgbasa ozi gị. Ndị na-akwado ndị ama ama ama ama ama n'ụwa, iOS & gam akporo, na-atụ anya itinyekwu na ndepụta a.
Reports - Ọnụ ọgụgụ na-enye akụkọ dị egwu gụnyere eserese na tebụl, na-egosi otu ngwa gị si arụ maka oge enyere. Mepụta akụkọ ntanetị dịtụbeghị mfe, n'ihi nnukwu akụkọ na-enye akụkọ nchịkwa. Cannwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ibe site na nchịkọta akụkọ nke akụkọ anyị wee họrọ ụdị eserese iji gosipụta na ibe ọ bụla.
Nnweta - Echefula ihe ọ bụla bara uru gbasara ngwa gị ma ị nọ na nzukọ, n'okporo ụzọ ma ọ bụ pụọ na tebụl gị. Ngwa a na-agagharị agagharị na-enye ihe kachasị dị mma na njiri anya. Lelee ngwa ọ bụla nke ngwa gị site na iji ihe nchọgharị. Nweta ngwa stats gị site na ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. Tụgharịa oge ọ bụla mapụtara oge n’ime oge na-arụpụta ihe.
Tags: gụọmobile nyochamobile ngwamobile ngwa nyochamobile ngwa mmepengwa mkpanaakanyocha ngwa mkpanakamobile ngwa ọdịnala